फिल्म ‘कौसिद’काे मुहूर्त, अभिनेत्री ऋचा मख्ख « Lokpath
२०७७, १७ पुष शुक्रवार २०:३५
फिल्म ‘कौसिद’काे मुहूर्त, अभिनेत्री ऋचा मख्ख
प्रकाशित मिति : २०७७, १७ पुष शुक्रवार २०:३५
काठमाडाैं । फिल्म ‘कौसिद’को शुक्रवार बिहान चावहिलस्थित गणेशस्थान मन्दिरमा मुहूर्त गरिएको छ । निर्देशक कुमार भास्कर, निर्माता केदार भुषालसहित ऋचा शर्माले पूजाआजा गरि फिल्मकाे शुभारम्भ गरेका हुन् ।
चलचित्रकर्मी केशव पाण्डेले मुहुर्त शटको क्ल्याप पर्काएसँगै मुहुर्त सिन खिचिएकाे ‘कौसिद’ आगामी माघ १ गतेदेखि छायांकन हुनेछ भने फिल्मलाई सोसल ड्रामा जनरामा राखिएको छ । मुख्य भूमिकामा भोलाराज सापकोटा र ऋचा शर्मा रहनेछन् भने बाँकी कलाकारहरूका लागि अडिसन लिएरै प्रतिभा अनुसार चयन गरिएका छन् ।
मध्यम वर्गीय व्यक्तिकाे सामान्य जीवनयापनका सहज तरिकाले चलाउन वाधा व्यवधानकाे सामना गर्दै अघि बढिरहेकाे परिवारको लागि मुख्य पात्रले गर्नुपरेको नैतिक संघर्ष र सम्झौता फिल्मको केन्द्रिय द्वन्द रहेकाे बड पिक्चर्सका संस्थापक तथा फिल्म ‘कौसिद’का कार्यकारी निर्माता दिमेश श्रेष्ठले बताए ।
औंठाछाप सहितकाे फिल्मको टीजर पोस्टर पनि लन्च गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएकाे टीजर पोस्टर अनुसार नव बिजयप्रकाश श्रेष्ठ तथा धिरजन थपलियाले फिल्मकाे पट्कथा लेखेका हुन् भने लक्षमण वानीया सह निर्माता रहेका छन् । फिल्मका अन्य कलाकारमा परिक्षीत विक्रम राणा, डा. निरञ्जन श्रेष्ठ, रूपेश दाहाल, निर्भिक भट्टराइ, सदिक्षा गाैतम, संदिप लोहनी, बिजय सुब्बा, कमल मण्डल लगायतका छन् भने फिल्मकाे छायांकन निशल पाैडेलले गर्नेछन् ।
प्रवेशराज पंगेनीको अवधारणामा सुरू गरिएकाे यस फिल्म काैसिदलाई सम्पादन मित्र डि. गुरूङले गर्नेछन भने कलर र भिएफएक्स सुदिप पाण्डेले गर्ने फिल्मका प्रोडक्सन म्यानेजर राजकुमार श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार बिपिन स्थापितले साउण्ड सुपरभाइजिङ गर्ने छन् भने मनि रत्न त्रिपाठीले साउण्ड डिजाइन गर्ने छन् साथै गीरिश–रोशनकाे ब्याकग्राउण्ड म्यूजिक दिने छन् भने असिसटेन्ट सिनेम्याटोग्राफरका रूपमा उमेश अधिकारी, प्रविण लिम्बु, निशान्त बस्नेत, सुशान्त केसी रहनेछन् ।
संजोग रसाइली फिल्मकाे कास्टिङ डाइरेक्ट गरेका छन् भने प्रोडक्सन कन्ट्रोल आशिष पुडाशैनीले गर्दैछन् । चिफ एसिसटेन्ट डाइरेक्टर नारायण उपाध्याय रहेकाे साे फिल्मकाे अन्य असिसटेन्ट डायरेक्टर किशोर केसी, डिम्पल राजथला रहेका छन् ।
ट्राइडेन्ट कन्सेप्टकाे पब्लिसिटी साथ रहेकाे फिल्मका पब्लिसिटी डिजाइनर रोयल भिमसेन तथा सोसल मिडिया टिममा विबेण सिजारी तथा बिबेक खकुरेल रहेका छन् । सुजन परियारले कस्ट्यूम डिजाइन गरिरहेकाे यस फिल्मकाे चर्चित फोटोग्राफर बसन्त गाैतम रहेका छन् ।
मृत्युपछि सुशान्तको पहिलो जन्मतिथि : कंगनाले लेखिन्-‘सबैले मिलेर सुशान्तलाई मारे’
काठमाडौं । बलिउड स्वर्गीय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतकोआज मृत्युपछिको पहिलो जन्मतिथि हो ।
पीएम कप: प्रदेश १ र कर्णाली तथा प्रदेश २ र…